အမေး.. အဖြေ ~ နေမင်းမောင် ( နည်းပညာ )
Home » Knowledge and FAQ » အမေး.. အဖြေ
By သန့်ဇင်ဌေး5:11 AM20 comments
ကို Moe Kaung Zaw မေးထားတဲ့ အမေးပါ
ဒီလိုပါ ကိုသန့် ဇင်ဌေးရေ.......ဘာမှတော့ အထွေအထူး မဟုတ်ပါဖူး
Windows7Genuine မဖြစ်တဲ့ ကိစ္စပါ.... Windows Loader စက်ထဲမှာ ရှိနေပြီးပါပြီ
ဆိုးတာက run လိုက်ရင် install နဲ့ uninstall ဆိုတာပေါ်တယ်...
မသုံးတတ်တော့ ရမ်းပြီးလဲ မလုပ်ရဲဖူး.... ဘယ်ဟာကို လုပ်ရင် ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာကို
အဲ့ဆော့ဝဲလ် နဲ့ Genuine ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကို
ကျွန်တောာ်လည်း အရင်အရင်တုန်းက ဒီအကြောင်းအရာတွေကို မရေးတော့ဘူးဆိုနေတာပါ။ ဒါပေ့မယ် ခု အကို တစ်ယောက်အခက်အခဲ့ ဖြစ်နေတာကို အကြောင်းပြုပြီးပဲ့ ကျွန်တော်ရေးပါ့မယ်။ တကယ်တော့ Genuine ဖန်းထားတယ်ဆိုတာ MS ရဲ့ ဖန်းနည်း တစ်မျိုးပါပဲ့ .။
စတင်တင်ချင်းတော့ genuine မညိပေ့မယ် ရက်ပြည့်တဲ့ အချိန် ဒါမှ မဟုတ် ကျွန်တော်တို့ Untouch Version ကို သုံးတဲ့ အချိန်မှာ ဒါမျိုးကို ကြုံရတာပါပဲ့။ Window7ကို ၀ယ်မသုံးပဲ့ ဒီတိုင်သုံးနေရင်တော့ Genuine ကို Window7တစ်ခါ တင်ပြီးတိုင်း ဖြေရမှာပါပဲ့။ ဘာကြောင့် ဖြေရတာလဲ့ မေးရင်တော့ Full သုံးဖို့ထက် Admin တစ်ယောက် အနေနဲ့ အပြည့်အ၀ အသုံးချဖို့ဆိုရင် ပိုမှန်ပါလိမ့်မယ်။ Linux မှာဆိုရင်တော့ Super User လို့ ခေါ်ပါတယ်။ အဲ့တော့ ကျွန်တော်တို့ Genuine ဖြေရတာကို မစိုးရိမ်ပါနဲ့ တစ်ခုတော့ ရှိတယ်။ Genuine ဖြေမဲ့ Loader ကို အရွေးမမှားဖို့လိုပါတယ်။ ဘာလို့ အရွေးမမှားစေချင်တာလဲ့ ဆိုတော့ Loader အရွေးမှားရင် window boot မတက်တော့တာတို့ အသစ်တင်ရတာတို့ ဖြစ်တက်လွန်းလို့ပါ။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော့် စိတ်ကြိုက် Loader ၂ ခုကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Loader ရမ်းနည်းကို ပုံနဲ့ပဲ့ ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
တစ်ခုက CW Loader ဖြစ်ပြီးတော့ နောက်တစ်ခုကတော့ Mr Daz ရဲ့ Daz Loader ပါ။ ဒီလင့်မှာ သွားယူနိုင်ပါတယ်။
Daz Loader ကို သုံးမယ်ဆို install ဆိုတာလေးကို နှိပ်ပေးပါ။ CW ဆိုရင်တော့ Apply ပေါ့။ Restart ကျပါလိမ့်မယ်။ ပြီးရင် Genuine ပြည်ပါပြီ။ အဓိကက သူတို့ကို ရမ်းတော့မယ် အချိန်မှာ Antivirus တွေ ရှိရင် ခဏပိတ်ထားဖို့လိုပါတယ်။
ကို kokaung lattaung ရဲ့ တောင်းဆိုထားတဲ့ ဆော့ဝဲတွေပါ။
အစ်ကို့ ကို software လေး နည်းနည်းလောက်တော့ တောင်းပရစေ ကျွန်တော် အတွက်တင် မကပဲ တခြား beginner photographer တွေရော professional သမားတွေ အတွက်ပါ အရမ်းအသုံးဝင်တဲ့ software တွေပါအစ်ကို1, "photo instrument software" (full version)
2, " portrait professional (full version)
3 adobe light room CS5 key and photo shop CS5 key
၃ ခုလုံးကို ကျွန်တော် အပေါ်က လင့်တွေမှာ တင်ပေးထားပါတယ်။ တစ်ခုပဲ့ ပြောစရာရှိတာပါ။ Adobe ပိုင်းပေါ့ ။ သူက Host ဖိုင်နဲ့ dll file တို့နဲ့ Crack ဖြည်ရတာပါ။ အထဲ့ မှာ Read me ဖိုင်ပါပါတယ်။
Ko Thant Zin Htay
I would like to request you. Now i studying Quickbook accounting. But
i can't get Original accounting quickbook study guide.I think that you
can help me as much as you can.
anticipation for thanks for you help and kindness
ကျွန်တော် အမှန်တိုင်းပြောရရင် accounting ပိုင်းကျတော့ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် စိတ်မ၀င်စားတာလဲ့ ပါသလို တွေ့ရင်လည်း မဒေါင်းထားဖြစ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ညီလေး နေမင်းမောင် နေပြန်ကောင်းမှပဲ့ ပြန်ပြီး မေးကြည့်ပေးမှ ရပါလိမ့်မယ်။ နောက်ထပ် ကျွန်တော် နက်ပေါ် သွားရင်းလာရင်းနဲ့ တွေ့ရင်တော့ ကျွန်တော် ဒေါင်းထားပြီး ပြန်လည်မေးလ်ပို့ပေးပါမယ်။ အခုတော့ ဒီအပိုင်းကို မကူညီနိုင်တဲ့ အတွက် နားလည်ပေးစေချင်ပါတယ်။
ကိုနေမင်းမောင် မြန်မြန်နေကောင်းအောင်ဆုတောင်းပေးနေပါတယ်။ကျနော်က moscow geology ကျောင်းမှာတက်နေတာပါ။ သိချင်တာလေးတွေလိုက်ရှာကြည့်ရင်း thalunaung.blogspot.com လေးကို
မှတ်တမ်းလေးသဘောပြုလုပ်ထားပါတယ်။ rss feed အလုပ်မလုပ်လို့ အကူအညီတောင်းချင်ပါတယ်။
ဘယ်လိုဇြေရှင်းရမှန်းမသိလို့လေ။ နည်းပညာပိုင်းလည်းကျနော်နားမလည်ဘူးကိုသန့်ဇင်ဌေး လည်းစာတမ်းနဲ့ မအားဘူးဖြစ်နေမယ်ထင်တယ်။အားရင်တော့ကူညီပေးပါဦး ကိုသန့်ဇင်ဌေး ဆိုဒ်လိပ်စာလေးလည်းပေးပါဦး
ကိုယ့် ညီအကိုတွေထဲ့ကပဲ့ ထင်တာပါပဲ့။ အရင်က Blog Wordpress Forum ပိုင်းတွေကို တော်တော်လေး စိတ်ဝင်တစား လုပ်ခဲ့တာတော့ အမှန်ပါ ။ နောက်ပိုင်း Web ပိုင်းကို သိပ်ဦးစားမပေးဖြစ်တော့ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ကူညီနိုင်ဖို့ထက် အချိန်ပေး မဖြေနိုင်တော့လိုပါ။ စာတန်းက ပြီးနေပြီဆိုပေ့မယ် စာတန်းဖတ်တော့မဲ့ က အရမ်းနီးနေပြီမို့ လမ်းညွှန်ပေးနိုင်သလောက်ပဲ့ ညွှန်ပေးပါရစေ… ကျွန်တော်တို့ ဒီလို Blog ပိုင်းတွေကို ကျွန်တော်လဲ့ စလေ့လာဖြစ်ပြီး လိုက်လုပ်ဖြစ်ခဲတဲ့ နေရာလေးကိုပဲ့ ညွှန်းပါ့မယ်။ အဲ့ ဆိုဒ်မှာ အကုန်ရှိပါတယ်။ တကယ်ကိုပြောတာပါ သေချာ လေ့လာလိုက်စားနိုင်ရင် blog ပိုင်းကစိတ်ဝင် စားဖို့ ကောင်းပါတယ်။အဲ့တော့ KP3 မိသားစု မှာ သွားရောက်လေ့လာပါ။ အစစအရာရာ အကုန်လုံးနီးပါးကို ရှင်းပြပေးထားပါတယ်။ မြန်မာလိုရေးထားတာဆိုတော့ လွယ်တာပေါ့။ အခက်ခဲ့ ရှိရင် အဲ့မှာပဲ့ comment ပေးထားခဲ့ပြီး မေးခဲ့လို့ရပါတယ်။ ဒီလင့်ပါ KP3 မိသားစု ဆိုဒ်လင့်ပါ။ ကျွန်တေ်ာတို့ဖြေပေးမှာထက်ပိုကောင်းပါလိမ့်မယ်။ ဒီနေရာမှာ Rss ပိုင်းတွေကို ရေးထားတဲ့ ပိုစ့်တွေ အများကြီးပါ။ သွားကြည့်ရင် အဆင်ပြေနိုင်မယ် ထင်ပါတယ်။
ဆော့ဝဲတောင်းတဲ့သူ၊ မသိတာတွေမေးတဲ့သူ အားလုံးကို မအားတဲ့ကြားကဖြေရှင်းပေးတဲ့ ကိုသန့်ဇင်ဌေးနဲ့ ကိုနေမင်းမောင် တို့နှစ်ယောက်စလုံးကို လေးစားအားကျအထင်ကြီးမိပါတယ်ဗျာ
ကျွန်တော့်စက်က ori home premium ကနေ ultimate လုပ်လိုက်တာ အခု 1 လ လောက်သုံးပြီးတော့
Genuine မဖြစ်တော့ဘူးဆို box ကျလာတယ်ခင်ဗျား
cw နဲ့ လုပ်တာလည်းမရဘူးခင်ဗျား
window တက်တိုင်း box ကျကျလာပါတယ်
ပြီးရင် သုံးနေရင်းလည်း ကျကျလာတယ်ခင်ဗျား
၀ယ်တုံးကwindow ခွေမပေးပါခင်ဗျား, repair disc burn ထားတောံရှိပါတယ်ခင်ဗျား
home premium ori ကို
အဲဒါ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ သင်ပေးပါခင်ဗျား
My web blog - Kräutersäckchen
my web blog; paleo ernährung muskelaufbau
Look at my blog post :: gast hat gluten intoleranz rezepte
Here is my web site ... low carb frühstück
My site; low carb frühstück
Magnificent items from you, man. I've have in mind your stuff prior to and you're just extremely fantastic.
I really like what you have obtained here, certainly like what you're saying and the best way through which you assert it. You are making it enjoyable and you still take care of to stay it wise. I can't wait to learn far more from you.
My web site :: steinzeitdiät
Also visit my web-site :: diät frühstück rezept
Hello! I've been reading your web site for some time now and finally got the courage to go ahead and give youashout out from Dallas Tx! Just wanted to mention keep up the great work!
Feel free to surf to my homepage :: ernährung
Normally I don't read article on blogs, but I wish to say that this write-up very forced me to try and do so! Your writing style has been surprised me. Thanks, quite great post.
Here is my web site ... wordpress installieren anleitung
My webpage ... wordpress einrichten
my homepage: abnehmen logi
my webpage ... low carb online store
Also visit my webpage ... lenkmatte einpacken
Feel free to surf to my page was ist riester rente
my site ... lenkmatte test
this side of the story. I can't believe you are not more popular because you surely have the gift.
my blog post ... good diet
နေသိန်းအောင် May 30, 2013 at 1:47 AM